CELEBRITY Archives - Page2of 19 - Sainpwar
ကိုသိန်းတန် ( မြန်မာပြည် ) US ပြန်သွားပြီဆိုလို့ သူ့ထူးခြားမှုလေးတွေ တင်ပြပါရစေ ….
အကျိုးပေးကောင်းသော ဂီတသမား ကိုသိန်းတန် ( မြန်မာပြည် ) US ပြန်သွားပြီဆိုလို့ သူ့ထူးခြားမှုလေးတွေ တင်ပြပါရစေ ။ ပထမ ဂစ်တာတဒေါင်ဒေါင်တဒင်ဒင်လုပ်နေလို့ ဖခင်အိမ်ပေါ်က ဆင်းခဲ့ရတယ် ။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အိမ် သွားနေတယ် ။ အဲဒီမိတ်ဆွေဟာ ကိုဇော်မင်း ( ဂစ်တာဥယျာဉ် ) ပါ ။ ကိုဇော်မင်းဟာ လူပျိုလူလွတ် ၊ ဂီတ ဝါသနာပါတယ် ။ ပြီးတော့ ခေတ်ပညာတတ် ၊ […]
ဒီရက်ထဲ အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည် လူသိများသူ နှစ်/သုံးကောင်လောက် လျှော့ခံရဖို့ များတယ်
ဒီရက်ထဲ အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည် လူသိများသူ နှစ်/သုံးကောင်လောက် လျှော့ခံရဖို့ များတယ် ဖြဲခြောက်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဖြဲခြောက်တယ်ထင်လဲ ဂရုမစိုက်ဘူး။ ဒီရက်ထဲ ဘောမတွေထဲက အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည် လူသိများသူ နှစ်ကောင်၊ သုံးကောင်လောက် လျှော့ခံရဖို့ များတယ်။ စကစ သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကို တွေးကြည့်ရအောင်။ နိုင်ငံတကာ သံတမန်တွေဆီ နားပေါက်နိုင်မယ့် ဘောခိုးမ,တွေဆီကတဆင့် နုကြည်ဆီမှာ လုပ်ကြံမယ့်စာရင်း (Hit List) ရှိနေပြီလို့ ဝါဒဖြန့်ခိုင်းတယ်။ ကြားနေပါ […]
ဒီတော်လှန်ရေးမှာ အမျိုးသမီးရဲဘော်တွေရဲ့ ကဏ္ဏကိုလည်း မေ့လျော့ထားလို့ မရပါဘူးမေ့မထားခြင်း ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ပါးစပ် နဲ့တင် ချီးကျုးအားပေးရုံ မဟုတ်ပဲ လိုအပ်ချက် တွေကို ဂရုတစိုက် ကူညီ ဖြည့်ဆည်း ပေးဖို့လည်း လိုပါတယ် အမျိုးသမီးရဲဘော်များ အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကို အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးပို့လာသည့်အတွက် အမျိုးသမီးလစဉ် သုံးပစ္စည်းများ လိုအပ်နေသော ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံ ကျွန်တော်တို့ ထောက်ပို့ဖိုက်တာမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည် ဪ […]
MRTV သတင်းတင်ဆက်သူ ကိုကျော်သက်လင်း အတွက် ဂုဏ်ယူနေရတဲ့ မြနှင်းရည်လွင် ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေ အနေတွေကို အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်‌။ ဖေဖော် ဝါရီလကစခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးမီးလောင်ကျွမ်းနေတာဆိုရင် ကိုးလကျော်အချိန်ကိုကြာမြှင့်ခဲ့ပါပြီ။ အာဏာသိမ်းတာကို လက်မခံတဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံးနီးပါး ပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတော်ကခန့်အပ်ထားတဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကလဲ CDM အနေနဲ့ပါဝင် သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုအထဲတွင် အာဏာစသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်အစောပိုင်းကထဲက CDM ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ MRTV ရုပ်သံရဲ့ သတင်းတင်ဆက်သူ ကိုကျော်သက်လင်း တစ်ယောက်လဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကျော်သက်လင်း ဟာလက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။ […]
ကြီးမား ကျယ်ဝန်းပြီး နေချင်စရာကောင်းလှတဲ့ ကိုယ်ပိုင် အိမ်ကြီး ကို ထုတ်ဖော် ပြသလာတဲ့ အိချောပို
ကြီးမား ကျယ်ဝန်းပြီး နေချင်စရာကောင်းလှတဲ့ ကိုယ်ပိုင် အိမ်ကြီး ကို ထုတ်ဖော် ပြသလာတဲ့ အိချောပို အနုပညာသက်တမ်းကိုးနှစ်တိုင်အောင် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှုတွေကို သိမ်းပိုက်ရရှိထားသူကတော့သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာအနုပညာ မျိုးရိုးရှိသူမဟုတ်ဘဲဝါ ရင့်အနုပညာရှင်စီနီယာတွေရဲ့ သင်ကြား ပြသပေးမှုတွေကြောင့်အခုလို ပြည်သူချစ်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည် လာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စူစူရဲ့အမိုက်စား ကောက် ကြောင်းအလှမှာ ပုရိသတွေ အားလုံး ကြွေနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စူစူဟာ လတ်တလောမှာတော့ကြော်ငြာလေးတွေ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးနေပြီပဲဖြစ်ပြီးသူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်း […]
အမေလုပ်သူရဲ့ အိမ်ပြန်မလာနဲ့ တချက်လွတ်အမိန့်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း….
အမေလုပ်သူရဲ့ အိမ်ပြန်မလာနဲ့ တချက်လွတ်အမိန့်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း…. လုပ်ချင်ရာသာ လုပ်နေမယ်ဆိုရင်အိမ်ကို ပြန်မလာနဲ့ လို့ အမေလုပ်သူရဲ့ တချက်လွတ်အမိန့်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း သူမရဲ့ခံစားချက်တချို့ကို ပေါက်ကွဲ ရေးသားနေတာမို့ မိခင်ရဲ့ တချက်လွှတ်အမိန့်ချခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း..တစ်ချိန်က အနုပညာလောကမှာ နာမည်တစ်ခုနဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုကိုရခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာပြီး နိုင်ငံခြားမှာ နေထိုင်နေတာကတော့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်မြို့မှာနေနေတာဖြစ်ပြီး အေးဝတ်ရည်သောင်း ပရိသတ်တွေဆီရောက်လာပြီးမကြာခင်မှ ပရိသတ်တွေလည် းပြန်သတိထားလာမိတာပါ။ လန်ဒန်မြို့မှာနေနေတာဖြစ်ပြီး အေးဝတ်ရည်သောင်း ပရိသတ်တွေဆီရောက်လာပြီးမကြာခင်မှ ပရိသတ်တွေလည်းပြန်သတိထားလာမိတာပါ။သူတို့ညီမတွေဟာ တစ်ချိန်က နာမည်ကျော်တွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အချိန်တော်ကြာပျောက်သွားခဲ့ကြတာပါ။ ပရိသတ်ရှေ့ပြန်ရောက်လာခဲ့ကြပေမယ့်လည်း […]
အဆိုတော် သားဂန်းနဲ့ သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင်တို့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပ…
အဆိုတော် သားဂန်းနဲ့ သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင်တို့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပ အဆိုတော် သားဂန်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဘေဘီမောင်တို့ဟာ ဒီကနေ့ နို၀င်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ မနက်မှာ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုတော် သားဂန်း ခေါ် မောင်ကျော်ရဲထက်နဲ့ သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင် ခေါ် မသန္တာဇော်တို့ဟာ ဒီကနေ့ နို၀င်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီက လှည်းကူးမြို့နယ် ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်မှာ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပလိုက်တာ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုတော် သားဂန်းနဲ့ […]
ပြည်သူ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော ရဲတိုက်ရဲ့ သတင်းကောင်း
ပြည်သူ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော ရဲတိုက်ရဲ့ သတင်းကောင်း အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်လမ်းနေရင်း လမ်းမှားပေါ် ရောက်ခဲ့ဖူးကာ အပြစ်တွေ ကြေအောင်ဆပ်ပြီး နောင်တတွေ အပြည့်နဲ့ ဘဝကို တဖန် အကောင်းဆုံး ပြန်နင်းလျှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စကစ က အာဏာသိမ်းခဲ့ချိန်မှာတော့ အမှန်တရားလိုလား ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တသားတည်း ရပ်တည်ပြီး နွေဉီးတော်လှန်ရေးမှာ def team နေရာကနေ .. ပြည်သူတွေရဲ့ ရှေ့ကနေ […]
ပျက်စီးနေတဲ့တောင်ပေါ်လမ်းလေးကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခဲ့တဲ့ မင်းမော်ကွန်း
ပျက်စီးနေတဲ့တောင်ပေါ်လမ်းလေးကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခဲ့တဲ့ မင်းမော်ကွန်း “မိုးတွင်းတုန်းကပျက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့မှီခို​နေရတဲ့​အရပ်ကတောင်​ပေါ်လမ်းက​လေး ၊ ဒီလမ်းက​လေးပျက်သွား​တော့ဒီအရပ်ကသူ​တွေအားလုံးရိက္ခာလမ်း​ကြောင်း ​စျေးဝယ်လမ်း​ကြောင်း​တွေဆိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့​တောင်​ပေါ်ကိုထမ်းရတင်ရ၊ ဒီလမ်း​လေးကိုပြင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာ မိုးတွင်းတစ်​လျောက်လုံးပါ၊ ဒီ​နေ့​တော့ ပြင်နိုင်ပါပြီ။ ကိုမှီခို​နေရတဲ့အရပ် ကိုယ့်ကို​စောင့်​လျှောက်​ပေးတဲ့​ဒေသကိုပြန်အကျိုးပြုခွင့်ရခြင်းဟာလဲ မင်္ဂလာ တစ်ပါးပါပဲ။ ​နောက်​နောင်လည်း တိုင်းရင်းသား​ဒေသ​တွေအတွက် ဆက်လက်အကျိုးပြုဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ လမ်း​ဖောက်ခြင်းအကျိုး​ကြောင့် ကျွန်​တော်တို့အားလုံးရည်ရွယ်ရာခရီးလမ်းဖြစ်တဲ့ ဒီမိုက​ရေစီပန်းတိုင်ကို ​ဖြောင့်ဖြူးစွာအလျင်အမြန်​ရောက်ရပါ​စေသား။ ” Aung Myo Credit Zawgyi ပ်က္စီးေနတဲ့ေတာင္ေပၚလမ္းေလးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးခဲ့တဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း “မိုးတြင္းတုန္းကပ်က္သြားတဲ့ကြၽန္ေတာ္တို႔မွီခို​ေနရတဲ့​အရပ္ကေတာင္​ေပၚလမ္းက​ေလး ၊ ဒီလမ္းက​ေလးပ်က္သြား​ေတာ့ဒီအရပ္ကသူ​ေတြအားလုံးရိကၡာလမ္း​ေၾကာင္း ​ေစ်းဝယ္လမ္း​ေၾကာင္း​ေတြဆိုခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔​ေတာင္​ေပၚကိုထမ္းရတင္ရ၊ […]
ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ပြည်သူများသို့ တောင်းဆိုစာ
ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ပြည်သူများသို့ တောင်းဆိုစာ ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ပြည်သူများသို့ တောင်းဆိုစာ အဆိုးဆုံးတွေ ဖြတ်ကျော်ပြီးပြီအကောင်းဆုံးတွေ ဖြစ်လာဖို့ကကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှ ရမယ်နော် ဟိုဘက်လည်းမပါ၊ ဒီဘက်လည်းမပါ၊ ကိုယ့်စီးပွား ကိုယ် ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးပါဝင်မှသာတိုက်ပွဲက အထိအခိုက်နည်းနည်းနဲ့မြန်မြန်ပြီးမှာပါ ဗျာ ပေါ်တင် မလုပ်ဝံ့ရင်တောင်ကြိတ်ပြီး လုပ်ပေးကြပါဘာမှ မလုပ်ပေးပဲတော့ မနေကြပါနဲ့ဗျာ။ မင်းမော်ကွန်း Zawgyi ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ မင္းေမာ္ကြန္းရဲ႕ ေတာင္းဆိုစာ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ မင္းေမာ္ကြန္းရဲ႕ ေတာင္းဆိုစာ အဆိုးဆုံးေတြ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးၿပီအေကာင္းဆုံးေတြ ျဖစ္လာဖို႔ကကိုယ္တိုင္ပါဝင္မွ […]